समकालीन सन्दर्भमा विमर्शलायक केही बिम्बहरु access_timeसाउन १, २०७७
अगाडि स्वादिष्ट खानाका परिकार देखेपछि काम कर्तव्यका यावत् कुरा बिर्सने जनावरको नाम के हो ? आफुले जे जति काम बिराए पनि लाज नमान्ने, पश्चात्ताप नगर्नेे र आफु नाङ्गो हुँदा पनि नाङ्गो छु भन्ने चेत नराख्ने जनावरको नाम के हो ? एक जना हजुरबाले आफ्ना नातिलाई यस्तो प्रश्न गरेको ...
नेकपामा आवश्यक शल्यक्रिया access_timeअसार ३०, २०७७
उत्कर्षमा पुगेको नेकपाभित्रको विवाद यतिबेला केही मत्थर जस्तो देखिएको छ । आन्तरिक बहसको उत्कर्ष सडकमा समेत व्यक्त भएको थियो । यो बहसलाई लिएर पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक तरङ्ग उत्पन्न भएको थियो । देशभित्र मात्रै होइन यो बहसलाई लिएर कूटनीतिक जगतमा समेत निकै ठूलो तरङ्ग उत्पन्न ...
किन बरालिएको छ हाम्रो राष्ट्रियताको बहस ? access_timeअसार २२, २०७७
राष्ट्रियताको बिषयमा बेलाबखत राष्ट्र नै पग्लिने गरी तातो बहस चल्ने गर्छ, बिस्तारै चिसिँदै जान्छ र बिर्सने अवस्थामा पुग्छ । चुनावको बेला असाध्यै बिक्री हुने ललिपप जस्तो हुन्छ राष्ट्रियताको बिषय । चुनाव नभएपनि केही समय यता देशमा फेरि राष्ट्रियताको मौसमी बाजा बज्न थालेको छ । ...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सामन्तवादी सङ्क्रमण access_timeअसार २१, २०७७
कोभिड–१९ महामारी विरुद्ध विश्वका सम्पूर्ण जनता जीवन मरणको दोसाँधमा लडिरहेका छन् । यो मानवीय क्षमता बाहिरको अत्यन्तै दुःखद् परिस्थितिमा सामन्तवादी सोच, चिन्तन र रवैयाको सङ्क्रमणले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन गाँजिएको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । लगभग ७० वर्षको बल...
सिंगै मुलुक केपी ओलीको 'क्वारेन्टिन'मा कहिलेसम्म ? access_timeअसार २१, २०७७
आफैं सबैभन्दा ठूलो दलको अध्यक्ष, आफैं प्रधानमन्त्री, आफ्नै निर्देशनमा चल्ने राष्ट्रपति र मन्त्रीहरू लिएर साढे दुई वर्षदेखि सरकार चलाइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुलुकको अधोगति र नेकपाको आन्तरिक समस्याका जड हुन्। तर, ओलीले आफ्नो कमजोरी लुकाउन दोष जति सबै आफ्नै दलका अन्य...
लद्दाख लफडा :आर्थिक कि सैन्य राजनीति ? access_timeअसार ९, २०७७
छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू भारत तथा चीनबीच भएको लद्दाख लफडाले दक्षिण एसिया तरङ्गित भएको छ । सघन गोलावारी, छेप्यास्त्र, अणुबम, परमाणविक हतियार, यान्त्रिक युद्घ जस्ता सैन्य कौशलताका उच्चतम प्रविधिलाई थाँती राखी लडाइँको पौराणिक अभ्यासले सबैलाई अचम्मित तुल्याएको छ । मुठ...
एउटा अनन्त विद्रोहीको सम्झना access_timeअसार ७, २०७७
उनी कसका थिए ? रुपचन्द्र वास्तविक कम्युनिष्ट थिए । तर उनलाई कम्युनिष्टहरुले कहिल्यै आफ्नो ठानेन । बरु उनको लासमाथि रातो झण्डा बोकेर भ्रमको खेती गर्न आनन्द मान्यो । कांग्रेस हुने उनको चरित्र थिएन । पञ्चायती व्यवस्थामा दुईपटक राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य भए । तर पञ्चहरुको मण्डलेतन्त्...
नागरिकतामा अनर्गल गतिरोध access_timeअसार ७, २०७७
नेपालको राष्ट्रियताको नाममा सवारी कस्नेहरूले बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने ‘नेपाल’ भन्ने शब्द कुनै समूह वा जातिको अर्थ दिँदैन । यसले नेपालको विविधतापूर्ण समाजको प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसैले ‘नेपालको राष्ट्रियता’ भनेको यहाँका सबै ‘राष्ट्र’...